Xarunta Xuquuqal iinsaanka Somaliland Oo Ku Baaqday In Xoriyadooda Loo Soo Celiyo Dhalinyaro Ku Xidhan Fikirkooda Oo Ay Dhiibteen. | Haqabtire News
Xarunta Xuquuqal iinsaanka Somaliland Oo Ku Baaqday In Xoriyadooda Loo Soo Celiyo Dhalinyaro Ku Xidhan Fikirkooda Oo Ay Dhiibteen.
June 18, 2016 - Written by admin
Xarunta xuquuqal iinsaanka ayaa xukuumada ugu baaqday in xoriyadooda loo soo celiyo dhalinyaro la xidhay ka dib markii ay ka hadleen heshiiskii lagu kireeyey dekeda magaalada Berbera.
Intii u dhexeeysay 6dii iyo 8dii June 2016, waxa magaaladda Hargeysa lagu xidhay afar qof oo kala ah Maxamed Sidiiq Dhame, Maxamuud Axmed, Nuuradiin Ibraahim iyo Maxamed Ducaale. Afartan qof waxa la xidhay kadib markii ay aragtidooda ka dhiibteen heshiis ay wada galeen Dawlada Somaliland iyo shirkadda DP World oo laga leeyahay Imaaraadka Carabt si ay u maamusho dekedda Berbera.Warsaxaafadeed ka soo baxay xarunta xuquuqal iinsaanka oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay Hadhwanaagnews ayaa u dhignaa sidan:
Afarta qof oo uu ku jiro Maxamed Sidiiq Dhame oo ah af-hayeenka garabka dhalinyarada ee Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani waxaay ku xidhan yihiin Saldhigga Dhexe ee Hargeisa. Waxa la soo xidhay kadib markii ay ka qayb qaateen shir saxaafadeed ka dhacay 5tii June 2016 Hoteelka Kaah kaas oo ay ku dhaliileen heshiiska.
Sida ay ilo u sheegeen Xarunta Xuquuqal Insaanka, waxa la xidhay iyada oo aanu jirin amar qabasho oo ka soo baxay Maxkamad kaas oo jideeyey xadhigooda. Falkaas oo ka soo horjeeda qodobka 25(2) ee dastuurka Somaliland.
Waxa lagu eedeeyey “inay dadwaynaha ku kiciyeen inaanay sharciga adeecin”, sida uu qareenkoodu u sheegay Xarunta. Hadii lagu helo eedahaas waxay wajihi karaan todobo sanadood oo xadhig ah.
Dastuurka Somaliland wuxuu damaanad qaaday xorriyadda hadalka sida ku cad qodobka 32(1). Qodobka 19aad ee Baaqa Caalamiga ah Xuquuqal Aadanaha iyo qodobka 19aad ee Heshiiska Caalamiga ah Xuquuqaha Madani iyo Siyaasadeed waxaay damaanad qaadeen xorriyadda aragtida iyo cabiridda aragtida. Sida uu dhigayo qodobka 10(2) ee dastuurku, Somaliland waa inay raacdaa xeerka caalamiga ah islamarkaana waa inay ixtiraamtaa Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqal Insaanka.
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ka walaacsan tahay dul qaad yarida aan loo dul lahayn dhaliilaha. Muwaadiniintu waxaay xaq u leeyihiin inay cabiraan aragiyahood xitaa hadii ay ka soo horjeedo mawqifka dawladda.
Xaruntu waxaay ka codsanaysaa dawladda Somaliland inay xorriyadooda si bilaa shuruud ah ugu soo celiso afarta qof ee xidhan islamarkaana inay la noqoto eedaha.
Guleid Ahmed Jama, Gudoomiyaha Xarunta Xuquuqal Insaanka